Cutting Hair Straight Guide - သင်၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး အားဆံပင်ညှပ်ခြင်း - ဂျပန်ကတ်ကြေး
Cutting Hair Straight Guide: တစ်ခြားသူရဲ့ဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်ပါ
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 06, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 8
မင်းဆံပင်ကိုဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေသလား။ သို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းကိုဖြောင့်သောဆံပင်ပေါ်တွင်ဆံပင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုပေးချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ကိစ္စနှစ်ခုလုံးမှာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်သင်လမ်းညွှန်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဖြောင့်သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီပထမ ဦး ဆုံးအစစ်မှန်ဆုံးဆံပင်ညှပ်စည်းမျဉ်းကိုတီထွင်ကြပါစို့။
အမြဲတမ်းသင်လိုချင်တာထက်လျှော့ချပါ သငျသညျအစဉ်အမြဲရှေ့ဆက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်သင်ကနောက်ပြန်လုပ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ဆံပင်တွင်ထုံးမရှိစေရန်သင့်လျော်သောဆံပင်ပုံသဏ္combာန်ဖြင့်ဆံပင်ကိုညှစ်ထားပါ။ ဆံပင်ခြောက်သွေ့မှု မှနေ၍ ဖြောင့်သောကြိုးမျှင်များကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ဆံပင်သည်လှပပြီးသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေလျှင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အမြော်အမြင်မရှိမီယင်းတို့ကိုစိုစေခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ သင်၏ဆံပင်ကို Ponytail တွင်ချည်ထားပါ
သင်၏ဆံပင်ကိုနောက်ကျောသို့ဖြည်းညှင်းစွာချိတ်။ အနိမ့်အလှလက်ဖြင့်သူတို့ကိုလုံခြုံစေပါ။ မင်းဆံပင်ကိုပျက်စီးသွားအောင်လုပ်ရမယ်၊ ဆံပင်အားလုံးဟာ elastic band နဲ့လုံခြုံနေတယ်။
၃။ Elastic Band ကြိုးကိုချည်ထားပါ
သင့်ဆံပင်ကို elastic band ဖြင့်ချည်ထားပါ၊ လက်မအနည်းငယ်အောက်သို့ကျ။ အခြား elastic band တစ်ခုကိုခြုံ။ ထားပါ။ ဒုတိယ elastic ကသင့်ဆံပင်ဘယ်လောက်ရှည်တယ်၊ ဘယ်လောက်တိုချင်လဲဆိုတာကိုသင့်အားပေးလိမ့်မယ်။
သင်၏အကြိုက်များအရ၊ ဒုတိယ band အောက်ရှိအခြား band များကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကြိုးတွေကို elastic band တစ်ခုနဲ့လုံခြုံစွာထားခြင်းကသင့်ဆံပင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအထိလျှော့ချနိုင်ပြီးသင့်လက်မတိုလွန်းခြင်းကဲ့သို့သောမတော်တဆမှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့်လွတ်လပ်မှုပေးသည်။
သင်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်သင်လိုချင်သောအရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့နောက်ခြေလှမ်းကသူတို့ကိုခုတ်လှဲသည်။ ထိုအရာအတွက်သင်၏ ponytail ကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားတွင်ထားရမည်။
သင်သည်သင်၏အလယ်နှင့်လက်ညှိုးကို သုံး၍ V ပုံသဏ္makeာန်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပတ်ပတ်လည်အစွန်းရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့လက်ချောင်းများကိုဆင်းလျှော။
သင်၏ ponytail ကိုသင်၏လက်ချောင်းများကြားတွင်လုံခြုံစွာပြီးသည်နှင့်နောက်တစ်ဆင့်မှာသင်၏ဆံပင်ကိုဖြတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူပြီးထိရောက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင်သည်ချွန်ထက်။ ကျွမ်းကျင်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ပေးမှုလိုအပ်သည်။
ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်ပုံမှန်ကတ်ကြေးမသုံးပါနှင့်။ ပုံမှန်ကတ်ကြေးများမှာမီးဖိုချောင်၊ ထည်၊
သင်ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ponytail ကိုပြန်ယူပြီးသင်၏ဆံပင်အားနည်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
သင့်လျော်သောစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကြေးမုံ ၂ ခုရရန်သင်၏နောက်ဆံပင်အားလုံးကိုနောက်သို့လှည့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ဆံပင်ကိုချည်။ လည်ပင်းမှအလယ်ပိုင်းမှ ခွဲ၍ ပေးလိုက်ကြ။ ယခုကျန်ရှိသောဆံပင်ကိုညာဘက်ပခုံးပေါ်ညာဘက်အပိုင်းမှဆံပင်ကိုချွတ်ပါ။ သင့်အတွက်အဆင်ပြေစေရန်၎င်းသည် pigtails ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်တူသည်။
သင်ဆံပင်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီဆိုလျှင်အရှည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ယခုအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးသွားကြဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ရှေ့နှင့်အလယ်လက်ချောင်းကိုအရင်ပြုသကဲ့သို့သင်၏ဆံပင်ကိုညှစ်ပါ။ ယခုသင်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်သင်လိုချင်သည့်အရှည်သို့၎င်းတို့ကိုချပါ။
သူတို့ကိုဆွဲချခြင်းအားဖြင့်အနည်းငယ်သင်၏လက်ချောင်း angle ။ သင်၏လက်ချောင်းများကိုသင်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်သင်လိုချင်သောအရှည်ထက်ပိုရမည်။ သင်၏လက်ချောင်းများကိုအပေါ်သို့အနည်းငယ်မြှင့်ပါ။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များသည်သင်၏ပခုံးပေါ်သို့ညွှန်ပြနေရမည်။
ဒီအနေအထားကမင်းတို့နောက်ကျောကနေဆံပင်ကိုတိုစေတယ်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီ၊ နောက်ကျောအပိုင်း၏ဆံပင်များသည်ပခုံး၏အပြင်ဘက်ခြမ်းဘေးတွင်ရှိကြောင်းအမြဲသေချာပါစေ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအပိုင်းကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်တိုင်းတာမှုများကိုစီမံနိုင်သည်၊
သငျသညျတ ဦး တည်းအခြမ်း၏ဖြောင့်ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူပြီးတာနဲ့အခြားအဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့ဖို့အချိန်ပါပဲ။ သင်ဆံပင်ကိုအတူတူပင်ဖြတ်တောက်ရန်သေချာစေပါ။ သင့်ရဲ့မဖြတ်ဘဲဆံပင်ကိုယူနှင့်ဖြတ်ဆံပင်မှသူတို့ကိုတိုင်းတာ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်လိုအပ်သည်မှာအတွင်းပိုင်းကြိုးမျှင်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးမှာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး အားဆံပင်ညှပ်ပေးရမည့်လမ်းညွှန်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ရေမှုန်ရေမွှားပုလင်းကိုယူ။ ဆံပင် damp ။ ဆံပင်ကိုနွေးထွေးနေချိန်မှာသူတို့ကိုမစိုစေအောင်သေချာပါစေ။ ကျနော်တို့ကဒဏ်ငွေဖြတ်ရှိသည်ဖို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲခံရဖို့ကြိုးမျှသာလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်မှုကိုဖြေလျော့ရန်လူတစ် ဦး ၏ ဦး ခေါင်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေပါ။
2. တစ် ဦး ကဆံပင် Bun လုပ်ပါ
ပထမ ဦး စွာသင်ဆံပင်ကိုညီမျှသောရပ်ကွက်သုံးခု ခွဲ၍ Bun ကိုပြုလုပ်ရမည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆံပင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်မှန်ကန်စွာခွဲထုတ်ရန်အတွက်ကြွက်အမြီးဖြီးလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်ဆံပင်၏အပိုင်းသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုပြန်ဆွဲထုတ်။ ခေါင်းပေါ်တွင် Bun တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ Bun ကိုကလစ်တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိပ်ဆံပင်ကိုချည်ပြီးတာနဲ့ခေါင်းကိုမထိဘဲထားပါ။
သင်၏လက်ချောင်းနှင့်လက်ချောင်းကိုယူပြီး V ပုံသဏ္shapeာန်ပြုလုပ်ပါ။ ယခုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားရှိဆံပင်မျှင်ကိုညှစ်ပါ။ အကျယ် ၁ မှ ၂ လက်မဖြစ်သင့်သောကြောင့်မျှင်ကိုညှစ်ပါ။
ကမ်းနားလမ်းကိုထုတ်ယူရန်အတွက် Rat-tail comb မှအကူအညီတောင်းခံနိုင်သည်။ ကြွက်အမြီးဘီးသည်သင့်အားညီမျှသောကဏ္makeများပြုလုပ်ရန်သေချာစေသည်။
ထောင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သူတို့ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဖြတ်ပုံကိုပုံပျက်စေပြီး gradation ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏လက်ချောင်းများကိုကြမ်းပြင်နှင့်ကမ်းနားလမ်းသို့အပြိုင်ထားပါ။
အခုတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညှပ်ယူ။ လက်ချောင်းအောက်မှာဆံပင်ဖြတ်။ ဆံပင်ညှပ်များအတွက်ညှပ်အသုံးပြုမှုကိုတိကျစေရန်နှင့်ဖြတ်ရန်တိကျသောဖြစ်သင့်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အပြိုင် ဦး ခေါင်းပါသည့်ဖြောင့်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားတွင်ထိုင်ခြင်းသည်သင့်အားလွယ်ကူစွာဖြတ်စေသည်။
နောက်တဖန်သင်၏လက်ချောင်းများအကြားခွဲခြားမှု pinch နှင့်အညီသူတို့ကိုဖြတ်။ သင်ဖြတ်ထားသောကမ်းနားလမ်း၏အောက်ဆုံးသို့ရောက်သည့်အထိသင်၏လက်ချောင်းများကိုကမ်းနားသို့ဆင်းရမည်။
သင်အောက်ခြေရှိဆံပင်ကိုညှပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မည်သည့်ခြားနားချက်အတွက်ဘယ်နှင့်ညာအပိုင်းများကိုတိုင်းတာပါ။ အကယ်၍ ကဏ္ both နှစ်ခုလုံးသည်တူညီနေပါကနောက်ဆံပင်သို့သွားရန်အချိန်တန်ပြီ။
ဆံပင်ကိုချည်။ သို့မဟုတ်ဖယ်ရ။ ကြွက်အမြီးဖြီး၏အကူအညီဖြင့်ဆံပင်ကိုခွဲထုတ်ပါ။ ဆံပင်တစ်ချောင်းကိုသင်၏လက်ချောင်းဖြင့်ကိုင်။ အရှည်ကိုတိုင်းပါ။ ကျန်တဲ့ဆံပင်ကို Bun ထဲပြန်ထည့်ပါ။
ငါတို့လက်ချောင်းဖြင့်ဖမ်းယူလိုက်သောအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယခင်ဖြတ်ထားသောဆံပင်နှင့်တိုင်းတာရမည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်, သစ်ကိုအလွှာကနေဆံပင် strand ယူ။ ယခင်ဆံပင်အလွှာအချို့နှင့်အတူလိုက်ဖက်။
အခုဒီနည်းကိုထပ်လုပ်ပြီးဆံပင်အားလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကဏ္ new သစ်မှဆံပင်မျှင်တစ်ချောင်းကိုယူပြီးယခင်ဆံပင်နှင့်တိုင်းတာ။ ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ။
layer အသစ်ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်သင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်ရမည်ကိုစဉ်းစားသည်။ ဆံပင်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အထိဆက်လုပ်ပါ။
11. Blow-Dry နှင့်နောက်ဆုံးချိန်ညှိ
ဆံပင်ညှပ်ပြီးတာနဲ့ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပြီးဆံပင်ကိုသန့်စင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ နောက်ထပ်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့ပြီးခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်လိုအပ်သောအစွန်ဆုံးသို့မဟုတ်အဆုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
Straight Hair ဆံပင်ဖြတ်ခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
ဆံပင်ညှပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကတ်ကြေးအသစ်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်မှိုင်းနေသောဓါးသွားကိုသုံးပါကသင်၏ဆံပင်ကို follicles မှထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
ဖြောင့်သောဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်သင်၏ဆံပင်ကိုအပေါ်သို့လှန်။ မရပါ။ ဆံပင်ကိုအထက်သို့လှည့်လိုက်ခြင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းခံရနိုင်သည်။
သင်၌ဆံပင်ကောက်ကောက် ရှိ၍ သို့မဟုတ်ဆံပင်ဖြူနေပြီဆိုလျှင်ဖြောင့်သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီသူတို့ကိုတည့်မတ်နိုင်လျှင်၊ ထိုကိစ္စတွင်သင်သည်ဖြောင့်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဆံပင်မညှပ်ဘဲဆံပင်ညှပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမသန့်ရှင်းဘူး။ ဆံပင်စိုစွတ်စေသောကြောင့်သင်ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆံပင်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲစေသည်။
ဆံပင်ညှပ်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညှပ်များကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲပြီးမြန်ဆန်သောစည်းမျဉ်းမဟုတ်ပါ။ သင့်တွင်မည်သည့်အရာမျှမရှိပါကပုံမှန်ကတ်ကြေးကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်အသုံးပြုနေသောကတ်ကြေးများသည်ချွန်ထက်သောဓါးရှိရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည်။
ဖြောင့်သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုဖြိုချရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤဆောင်းပါးကိုသင်မည်သို့ရှာတွေ့သနည်း။ မှတ်ချက်ကဏ္inတွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။